Doorashooyinka Archives - Page 4 of 14 - Sawirrotv
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha oo ka Hadlay Sidii Maanta ay wax u Dhaceen (Dhagayso)
January 31, 2017 – Guddoomiyaha Guddiga doorashada Madaxweynaha, C/raxmaan Ducaale Beyle oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka Federaalka ayaa ka hadlay sidii maanta ay wax u Dhaceen iyo wixii ay damacsanaayeen. Guddoomiye Bayle ayaa sheegay in maanta dalka oo dhan ay ka jirtay cilad xagga Internetka ah , taasoo aan suurta gelin in dooda …
TARSAN oo Sheegay in Doodii Maanta loo Qaban Lahaa Musharaxiinta ay Afduubteen Madaxweynaha iyo Xulufadiisa (Dhagayso)
January 31, 2017 – Sida Lagu waday, waxa uu qorshuhu ahaa in maanta magaalada Muqdisho lagu qabto dood wadaag ay ka qeyb galayaan Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxtinimada Soomaaliya. Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha ayaa waxaa ay ka kooban yihiin 24 musharax, waxaana lagu waday in 12 ka mid ah ay maanta gelinka hore …
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Madaxweynaha oo ka Hadlalay Qaabka Doorashada ay u Dhacayso (Dhagayso)
January 30, 2017 – Guddoomiyaha guddiga qaban-qaabada doorashada madaxweynaha Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan Doorashada in ay ku dhacdo nidaam hufnaan iyo cadaalad ku salaysan. Waxuuna gudoomiyuhu uu sheegay in laga feejignaanayo musuq maasuq iyo wax is daba marin ka dhaca codadka ay dhiibanayaan xubnaha …
Guddiga Suggida Amniga Doorashooyinka oo Maanta ku kulmay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
January 29, 2017 – Maxamed Cumar Carte oo ah Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliy ayaa maanta shir gudoomiyay, Guddiga Suggida Amniga Doorashooyinka Qaranka, kaasi oo looga hadlayay sugidda amniga xarunta doorashada Madaxweynaha. Kulankani ayaa waxaa ka soo qaybgalay Wasiirada Cadaaladda iyo Amniga, Guddiga Baarlamaanka u qaabilsan doorashada Madaxweynaha, Taliyeyasha ciidanka qalabka sida, ku xigeenka …
Diiwaangelinta Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha oo Maanta la soo Gaba-Gabeeyay (Akhriso Magacyada)
January 29, 2017 – Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa galabta soo gaba-gabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha Dr. C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in la soo gaba gabeeyay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya jagada Madaxweynaha. Gudoomiye Bayle ayaa sheegay in musharaxiinta la diiwaangeliyay ay tiradoodu guud gaareyso 24 musharax. Diiwaangelinta …
Madaxweynaha Soomaaliya oo Sheegay Inuu Aqali Doono Natiijada ka soo Baxda Doorashooyinka Dalka (VIDEO)
January 29, 2017 – Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Xasan Sheekh Maxamuud ahna Musharax mar kale u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd iska diiwaan geliyay xarunta Guddiga doorashada Madaxweynaha, ayaa sheegay inuu u hoggaansami doono shuruucda iyo nidaamka doorashada Madaxweynaha ee dhici doonta 8-da bisha February. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay inay tahay maalin …
Tarsan oo Mar Labaad Sheegay Inuu Dalka ka Eryayo Gen. Gabre Hadii uu Madaxweyne Noqdo (VIDEO)
January 29, 2017 – Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa ku celiyay mar kale inuusan aqbali doonin in Gen. Gabre uu cagahiisa soo dhigo dalka Soomaaliya. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay …
Magacyada Musharaxiinta Madaxweynaha ee Ilaa iyo Hadda Is Diiwaangeliyay oo la Shaaciyay
January 27, 2017 – Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaciyay illaa iyo hadda inay diiwaan-geliyeen afar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga Doorashada Madaxweynaha oo fadhigeedu yahay Xarunta Villa Hargeisa, oo ku dhex taala Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia, ayaa waxaa Khamiistii si rasmi ah uga bilowday diiwaan-gelinta musharaxiinta. Shariif Sheekh …